Di Maria: "Shaki la'aan waa waxaan la rumeysan karin guushii aan ka gaarnay Barcelona"
Home Sports Di Maria: “Shaki la’aan waa waxaan la rumeysan karin guushii aan ka...
Di Maria: “Shaki la’aan waa waxaan la rumeysan karin guushii aan ka gaarnay Barcelona”
PSG ayaa xalay wacdaro ku dhigtay Barcelona oo marti u ahayd, waxayna uga soo adkaadeen 4-0 lugta hore ee wareega 16-ka koobka horyaalada yurub.
Angel Di Maria ayaa sheegay in kooxdiisu ay filaysay inay guul ka gaari karaan Barcelona balse marnaba aysan ku fikirin inay 4-0 uga adkaan karaan.
“Wixii dhacay waxay ahaayeen lama filaan, waan filaynay inaan guul ka gaarayno laakiin inaan guul uga gaarayno natiijada intaas la eg shaki la’aan waa wax aan la rumaysan karin” ayuu yiri laacibkii hore ee Real Madrid.
“Aad ayaan u faraxsanahay, waxaan rajaynayaa in qaab kaan oo kale aan u ciyaarno kulanka lugta labaad, suurogal ma ahan inaan markale uga adkaano natiijadaan oo kale, laakiin waa inaan ilaashanaa go’aankii aan caawa soo muujinay”.
Dowladda oo ka digtay in maqaayadaha la furo maalinkii iyada oo...
Wasaaradda arrimaha Diinta iyo Awqaafta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa digniin ka...